Chigadzirwa Chibatsiro ◎ Ine yakanaka yekupisa kugadzikana uye kukanganisa kusagadzikana. Pasi pemamiriro e110 degrees uye kushushikana kwezvakatipoteredza kwe1.9 MPa, yakaedzwa kwemaawa mazana masere nemakumi matanhatu nemakumi matanhatu maererano nematanho epasi rose. Zvakaonekwa kuti pombi yanga isina kana kubvaruka kana kukuvara. PE-RT pombi inogona kudzivirira kumwe kupesana uye kukanganisa pombi panguva yekuvaka, uye ine mutengo wakanaka unoshanda. ◎ Iine zvakanakira kurema uremu, hupenyu hwakareba hwebasa, inochinja mukana uye yakapfava kukombama. Kuenzaniswa ne XPAP, ...
Kupisa-kusagadzikana polyethylene inosanganisa pombi ine perforated simbi mesh
Prefabricated thermoprotected polyethylene pipe ndeimwe mhando nyowani yekudziya pombi, iyo inosanganisira yekushanda pombi (inosanganisira fittings), polyurethane solidid Foam insulation, polyethylene inodzivirira goko rekubatana kwekuumbwa. Sezvo vatatu vacho pavanova muviri mumwe, wakavigwa zvakananga muvhu, iko kupisa kwekuwedzera kunetseka kunokonzerwa nekuchinja kwetembiricha mukati mechubhu yemukati kunoendeswa kune polyurethane insulation layer. Iyo pombi yekunze, inoiswa pasi pekupesana kwevhu, inoendeswa ...
Perforated simbi ubvise polyethylene inosanganiswa pombi yekuwana mvura
Perforated simbi ubvise polyethylene composite mutopota ndeyekuita maburi nekumhanyisa pamhando yepamusoro yakatetepa simbi mahwendefa, uye inogadzirwa kuita mutete-wakakomberedzwa masimbi mapaipi ane maburi neArgon arc butt welding kuti ive yekusimbisa. Ipurasitiki inowedzerwa mukati nekunze kwepombi dzakaonda-dzakakomberedzwa dzesimbi dzine maburi. Ipurasitiki pamadziro ekunze yakanyatsobatanidzwa pamwe chete kuburikidza neaya ma pores kuti aite yakazara neakasimbiswa mutete-wakakomberedzwa nesimbi pombi. Maitiro ekugadzira anotevera: bvisa ...
HFB imwechete yemadziro emagetsi inoputika
Kupisa kusinga pise, kwakachengeteka uye kwakavimbika: Chinhu chikuru chepombi chinogadziriswa polypropylene, ine yakanaka yekuisa zvinhu uye inogona kuramba ichirwisa kumanikidza kwekunze kumatembiricha akakwirira. Iyo yakakodzera seye yekudzivirira sleeve yeakakwira-magetsi magetsi mitsara. Tensile uye kumanikidza kusagadzikana, kuomarara uye kusanduka: Iyo ine yakasimba tensile kuramba, yekunze kumanikidza kuramba uye zvirinani kuchinjika. Iyo yekubatanidza yakavharwa neclamp, iri nyore ...
IFB yemukati-yemadziro emagetsi mvuto, inozivikanwawo seCM inosanganiswa yakasimbiswa miviri-madziro emagetsi mvuto, ine rondedzero dhizaini dhizaini, yakasarudzika dhizaini, yakaderera kukweshera kusagadzikana, kugona kwakanaka, kupisa kwakawanda tembiricha, kuomarara kwemhete, uye hakusi nyore kupaza uye zera. Rusvingo rwekunze rwuri mhango mhete yakarongeka, ichishandisa zvizere I-simbi chimiro musimboti yekuvandudza rectangular inertia yemuchinjikwa chikamu, uye rwomukati rusvingo rwakatsetseka kwazvo, izvo zvinovandudza mashandiro etambo ...